Vidio ny boky resahina Thermomix - Thermorecetas
Boky fanamboarana ho an'ny Thermomix
Rehefa avy niasa mafy nandritra ny volana maro dia azontsika atao ihany ny manambara amin'ny hafanam-po farany fa amidy izao ny boky Thermorecetas. Afaka mahita ao amin'ity boky ity ianao Resipeo 100 hiomanana amin'ny Thermomix anao amin'izay hahagaga anao ny namanao sy ny fianakavianao.
Resipeo tsikelikely 100 matsiro ho an'ny Thermomix, 60 amin'ireo dia manokana ary mbola tsy navoaka tao amin'ny bilaogy
Ao amin'ny boky dia ho hitanao ny fomba fahandro amin'ny fahasarotana fototra sy sarotra kokoa, lovia nentim-paharazana sy famoronana, fitsidihana gastronomy nasionaly sy eran-tany, nefa tsy hadinonao mihitsy olona tsy mahazaka alikaola.
Ilay boky Azonao atao ny mividy azy mivantana amin'ny alàlan'ny Amazon ary hody aminao io afaka andro vitsivitsy.
Mazava ho azy fa ho hitanao ao koa io fivarotam-boky any Espana toy ny Fnac, Casa del libro, Corte Inglés ...